saareyaasha xajmiga loo yaqaan 'acrylic sheet' Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha warshad xaashi acrylic cad
tayo sare leh baalal akrilik ah
Guddi loo yaqaan 'Acrylic Panel' waa shey balaastig ah oo hufan oo leh awood muuqata, qallafsanaan, iyo caddayn muuqaal ah. Xaashida looxa waxay soo bandhigtaa sifooyin u eg muraayad — hufnaan, hufnaan, iyo hufnaan - laakiin kala badh culeyska iyo marar badan saamaynta iska caabinta muraayadaha.
Xaashida loo yaqaan 'Acrylic Sheet' waa 'ACRYLIC', oo badanaa loo yaqaan "xaashida loo yaqaan" plexiglass sheet "ee sida gaarka ah loola dhaqmo". Iyadu waa walax kiimiko ah. Magaca kiimikada waa "PMMA", oo ka tirsan khamriga propylene. Warshadaha arjiga, alaabada ceeriin ee loo yaqaan 'acrylic' guud ahaan waxay u muuqdaan qaab jajab ah, taarikada, tuubooyinka, iwm.
Waraaqaha looxa loo yaqaan 'Acrylic Sheets' waxay leeyihiin hufnaan aad u fiican, saafi cad ka dib markii la safeeyey, gudbinta iftiinka ilaa 93.4% .Seed diiran oo siman oo aan lahayn arrimo shisheeye; caabbinta jawiga wanaagsan iyo heerkulka iska caabbinta iyada oo aan la yarayn oo la madoobo;
U adkaysiga cimilada oo aad u fiican: la qabsiga deegaanka dabiiciga ah, xitaa wakhti dheer oo qorraxda ah, dabaysha iyo roobku ma beddeli doonaan sifooyinkooda, guryaha ka hortagga gabowga, sidoo kale waxay badbaado ku noqon karaan in dibedda lagu isticmaalo.
Xaashida acrylic-ka loo yaqaan 'Aquarium acrylic' waa la tuuraa xaashida acrylic-ka oo aad u cad. Caadi ahaan way ka sii dhumuc weyn tahay 15mm.